DR GABOSE WAXA WAQTIGAN KA DHAWAAJIYAY MA HIIL QARANBAA MISE WAA MID QABIIL. Qalinkii Mohamed Haibe Hersi | Gabiley News Online
DR GABOSE WAXA WAQTIGAN KA DHAWAAJIYAY MA HIIL QARANBAA MISE WAA MID QABIIL. Qalinkii Mohamed Haibe Hersi
Dr gabose waxa uu maalmahii tagay qabtay shir jaraa’id oo uu kaga hadlay xaalada dalku maraayo, isagoo markaa u hadlay sidii uu dalkii kala tagay. Hase ahaatee hadalkiisa waxa laga dhadhan sanaayay caadifad qabiilnimo isagoo danta dalka haba yaraatee aan hoos u eegin. Waxa uu carabka ku dhuftay ergadii garxajis, ee madaxwayne muuse cafiska u waydiisay jabhadii caare , madaxwayne muusane marka laga reebo ninka hogaaminaaya,intii kale cafiska uu u fidiyey, ergadii garxajisna way ku raaceen arintaa madaxwaynaha.
• Gaboose waxa uu ka hadlay beelaha darafaha, isagoo markaa u jeeda samaroon, dhulbahante iyo warsangali, kana dhigay in beelahaasi talada wadanka waxba laga siin. Hadaba marka aad xaqiiqda isdultaagto ,maskaxda wanaagdoonkii waxay arkaysaa, somaliland in si cadaalada oo aan waligeed soo marin ilaa 1960, dawladihii wixii la isku odhan jiray jamhuuriyada somalia, ay taalo maanta. Hadii aynu soo qaadano madaxwaynahii hore riyaale, oo ka soo jeeda qabiilka samaroon, waxa uu wadanka xukumaayay 8 sano. 28 sano ee ay somaliland jirtay , qabiilka samaroonku waxa ay soo qabteen afargoor, jagada madaxwayne ku xigeenka. Dhulbahante iyo warsangelina jagooyin sare ayay wadanka ka soo qabteen,iminkana ka hayaan. Waqtigan dadka ay dawlada xamar soo dirto oo aad u isticmaala magaca, looma sina somaliland waa dad dano gaara leh oo doonaya in ay somaliland u eekaato koonfurta somalia, waxaanay isku dayeen in ay dagaal sokeeye ka ridaan, laakiin illaahay baa mahad leh, way ku guul daraysteen. Hadii aan wax ka idhaa dadka leh garxajis waa laga badsaday, madaxwaynahii ugu horeeyey ee somaliland Cabdirahman AUN waxa uu ahaa nin garxajisa. Labada xisbi wadani iyo ucid waxa hogaamiya laba nin oo garxajisa.
• Gabogabadii DR gabose waxa uu ahaa wasiirkii arimaha gudaha ee dawladii siilaanyo, dhibaatooyinkan bariga somaliland, sida bariga sanaag, ceelafwayn way jireen waqtigiisii waxbana ka muu qaban, hadalkiisa maantu miyaanu ahayn oohintii yaxaaska.
• Dr gabose hadii aad booqato cusbitaalkiisa, kulanka ugu horeeya waxa uu ka qaadaa bukaanka 50 doller. Hadaba dr gabose oo ahaa dhakhtarkii gaarka ahaa ee siyaad bare, umada reer somaliland waxay uga fadhiyaan , sidii uu bulshada iskugu soo dhawaynlahaa, gaar ahaan sidii uu ninkaa cadawga ku noqday wadanka ee caare uu ugu caqli celinhaa.